Football Khabar » ग्रानाडामाथि कठिन जितपछि बार्सिलोनाका नयाँ प्रशिक्षक र कप्तानले के भने ?
ग्रानाडामाथि कठिन जितपछि बार्सिलोनाका नयाँ प्रशिक्षक र कप्तानले के भने ?
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले नयाँ प्रशिक्षक क्विके सेटिनको कमान्डमा पहिलो खेलमा १–० को कठिन जित निकाल्यो । गत राति घरेलु मैदान क्याम्प नोउमा ग्रानाडाविरुद्ध साँघुरो जित निकाल्न कप्तान लिओनल मेस्सीले खेलको ७६औं मिनेटमा १ मात्रै विजयी गोल गरेका थिए ।
त्यसअघि पाहुना टोली ग्रानाडा ६९औं मिनेटमा १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो । ग्रानाडाका डिफेन्डर जर्मन सान्चेज रातो कार्ड खाँदै मैदान छाडेपछि बार्सिलोनाले दबाब बढाएर गोल निकाल्न सकेको थियो । त्यसअघि बार्सिलोना आफ्नै घरमा खुलेर खेल्न सकिरहेको थिएन ।
समग्रमा बार्सिलोनाले नयाँ प्रशिक्षकको पहिलो खेलमा खेल जितेर ३ अंक जोड्दै लिग लिडर बने पनि खेलको स्तरमा पनि खासै परिवर्तन देखिएन । घरेलु दर्शकमाझ तुलनात्मक रूपमा कमजोर टिमसँग बार्सिलोनाले औसत खेल मात्रै पस्किन सक्यो । सो कुरा प्रशिक्षक सेटिन र कप्तान लिओनल मेस्सी दुवैले स्वीकारेका छन् ।
आफ्नो डेब्यु खेल जितेपछि नयाँ प्रशिक्षक सेटिनले मिडियासँग कुरा गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफ्नो पहिलो खेल जित्दा खुसी लागेको बताउँदै टिमको प्रदर्शनबाट आफू खुसी भएको पनि बताए । ‘पहिलो कुरा हामीले ३ अंक जितेर शीर्ष स्थानमा चढ्यौं, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हामी यो खेल जसरी पनि जित्न चाहन्थ्यौं,’ सेटिनले भने ।
सेटिनले आफ्नो पहिलो खेलमा टिमले राम्रो प्रदर्शन गरेको पनि बताए । ‘मेरो विचारमा यो राम्रो खेल थियो । तर, हामीमा अझैं केही न केही अभाव छँदैछ । ग्रानाडाले निकै मजबुतसँग रक्षापंक्ति बनाउँदा हामीलाई कठिन भयो । तर, हामीले ढिलै भए पनि गोल गर्न सक्यौं । मेरा खेलाडीबाट म खुसी छु,’ उनले थपे ।
सेटिनले ला लिगा मात्रै नभएर ठूला प्रतियोगितामा अघि बढ्न अझै थुप्रै कुरा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘यो पहिलो खेल हो । पहिलो खेलबाटै सबै मूल्यांकन हुँदैन । मलाई लागछ, लिगमै पनि बलियो अवस्थामा रहन हामीले धेरै सुधार गर्नुपर्छ । च्याम्पियन्स लिगका लागि हामीले झनै सुधार र तयारी गर्नुपर्छ,’ सेटिनले भने ।
ग्रानाडाविरुद्ध विजयी गोल गर्ने मेस्सीको सेटिनले तारिफ गरे । ‘मेस्सीले आज पनि त्यही गरे, जुन सधैं गर्छन् । उनी मैदानमा छँदासम्म अन्तिम १० सेकेन्डसम्म पनि खेल जित्ने सम्भावना खुला हुन्छ,’ सेटिनले थपे ।
खेल जितियो तर सुधार छैन : मेस्सी
कप्तान मेस्सीले भने क्याम्प नोउमा ग्रानाडलाई जित्दा खुसी लागेको भए पनि टिम अझै स्तरमा आउन नसकेको बताए । उनले अझै कहीं न कहीं धेरै कुरा मिस भइरहेको बताए । ‘मलाई लागेको थियो, हामी राम्रो अन्तरमा खेल जित्नेछौं । तर, उनीहरू १० खेलाडीमा झरेपछि पनि हामीलाई गोल निकाल्न कठिन भयो । तर, हामीले गोल गरेर खेल जित्यौं,’ मेस्सीले भने, ‘यो जितबाट म र टिम खुसी छौं । तर, यति नै पर्याप्त होइन । हामी यही स्तरमा मात्रै रहन सक्दैनौं ।’
ग्रानाडाका खेलाडी जर्मन सान्चेजले रातो कार्ड खाएको विषयमा पनि मेस्सीले धारणा राखे । मेस्सीले उनले दोस्रो पहेंलो कार्ड नपाउनुपर्ने बताए । ‘मलाई लाग्दैन, सान्चेजले दोस्रो पहेंलो कार्ड पाउनुपर्थ्यो, त्यो त्यत्ति गम्भीर फउल थिएन,’ मेस्सीले भने ।
प्रकाशित मिति ६ माघ २०७६, सोमबार १३:२६